Izindaba - Ungabhekana kanjani nokwehlukaniswa kokuhlungwa kwe-reverse osmosis membrane
Sinikeza izixazululo ezisebenzayo emkhakheni wamanzi
Ukusekelwa kwe-imeyili info@bic-iwhr.com
Shayela Ukusekelwa + 86-13911394250
Idamu le-Hydraulic Elevator
Indawo Yokuhlanza Amanzi Equkethe Isitsha
Indawo Yokuhlanza Amanzi Olwandle
Idamu Eliphakanyisiwe elenziwe lula (SED)
Ungabhekana kanjani nokuhlukaniswa kokuhlushwa kwe-reverse osmosis membrane
Reverse osmosis system iyingxenye ebalulekile yemishini yokwelashwa yamanzi emincane naphakathi nendawo ezenzakalelayo, kepha kukhona ingozi efihliwe ohlelweni lwe-reverse osmosis, okungukuthi, ubuso be-reverse osmosis membrane kulula ukwakha ukuhlunga kwe-solute nge-solute noma ezinye izinto ezigciniwe, ezizothinta ikhwalithi yokungcola kwemishini yokulapha amanzi.
1. Ukwandisa indlela yejubane
Okokuqala, singazisebenzisa izindlela ezivame ukusetshenziswa embonini yamakhemikhali ukukhulisa ukuphazamiseka. Lokho wukuthi, zama ukukhuphula ijubane lomugqa loketshezi olugeleza ebusweni be-membrane. Isikhathi se-adsorption se-solute singancishiswa ngokunciphisa isikhathi sokuhlala kuketshezi futhi sandise isivinini soketshezi emishini yokuhlanza amanzi emincane naphakathi nendawo ezenzakalelayo.
2. Ukupakisha indlela
Isibonelo, ama-29 ~ 100um spheres afakwa kuketshezi oluphathwayo futhi ageleza ngohlelo lwe-reverse osmosis ndawonye ukunciphisa ubukhulu besendlalelo somngcele we-membrane nokwandisa isivinini sokudlulisa. Izinto zebhola zingenziwa ngengilazi noma i-methyl methacrylate. Ngaphezu kwalokho, ngohlelo lwe-tubular reverse osmosis, ibhola lesiponji elincane nalo lingagcwaliswa kuketshezi lokuphakelayo. Kodwa-ke, kumamojula wepuleti nohlobo lohlaka, indlela yokwengeza ukugcwalisa ayifanele, ikakhulukazi ngenxa yengozi yokuvimba isiteshi sokugeleza.
3. Pulse indlela
Kungezwa i-pulse generator enqubeni yemishini yokwelashwa kwamanzi. Ukuphakama nobuningi be-pulse kuhlukile. Ngokuvamile, ubukhulu be-amplitude noma imvamisa, kukhula ijubane lokugeleza. Ama-Agitators asetshenziswa kabanzi kuwo wonke amadivayisi wokuhlola. Okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi inani lokudlulisela ngobuningi linobudlelwano obuqondile nenombolo yezinguquko ze-agitator.
4. Ukufakwa kwesikhuthazi se-promoter
Abagqugquzeli be-Turbulence bayizithiyo ezahlukahlukene ezingathuthukisa iphethini yokugeleza. Isibonelo, kuzingxenye ze-tubular, kufakwa izingxube ze-spiral ngaphakathi. Okwesigaba sepuleti noma sohlobo lwe-membrane ulwelwesi, i-mesh nezinye izinto zingakleliswa ukukhuthaza isiphithiphithi. Umphumela wesikhuthazi seziyaluyalu muhle kakhulu.
5. Faka isikali sesivimbeli sokusabalalisa
Ukuze uvimbele ulwelwesi olubuyela emuva lwe-osmosis ekukhuleni kwimishini yokwelashwa kwamanzi, kungezwa i-sulfuric acid noma i-hydrochloric acid ukulungisa inani le-pH. Kodwa-ke, ngenxa yokugqwala nokuvuza kwesistimu ye-asidi, opharetha ukhathazekile, ngakho-ke i-dispersive scale inhibitor ngokuvamile iyanezelwa ukugcina ukusebenza okujwayelekile kohlelo lokwelashwa kwamanzi.
ngobubanzi bebhizinisi obuthinta ukubonisana ngezobuchwepheshe, insizakalo kanye nokusetshenziswa; ukuthuthukiswa komkhiqizo, ukukhiqizwa, ukuthengiswa nokukhuthazwa, kanye nokwakhiwa kwamaphrojekthi afanele; nokuthengisa kanye ne-ejensi yobuchwepheshe nemikhiqizo.
Ungabhekana kanjani nokuhlushwa kwe-polarizati ...
Amehlo kumaphrojekthi wokuphakelwa kwamanzi ukuphepha ...
Reverse osmosis amanzi prereatment isakhiwo
NgoJuni 2019 Umqashi uvakashele iBhora HED Pilot ...
NgoJulayi 2019, ukuvakashelwa kwe-BIC eMnyangweni Wezolimo ...